एकल कंगना फिचर ‘मणिकणर्णिका’को तेस्रो दिने कमाई कति - Experience Best News from Nepal
एकल कंगना फिचर ‘मणिकणर्णिका’को तेस्रो दिने कमाई कति
अभिनेत्री कंगना रनौतको फिल्म ‘मणिकर्णिका’ जनवरी २५ मा प्रदर्शन भएसँगै दर्शक तथा फिल्म समीक्षकले प्रशंसा गरिरहेका छन् ।
चारैतिर कंगनाको अभिनयको चर्चा तथा वाहवाही भइरहेको छ । यससँगै यस फिल्मले पहिलो दिनमै १३ देखि १५ करोडको व्यापार गर्न सक्ने अनुमान लगाइएको थियो । तर यथार्थमा त्यसको ठिक उल्टो भयो । प्रदर्शनको पहिलो दिनमा ‘मणिकर्णिका’ ले जम्मा ८ करोड ७५ लाखको मात्र व्यापार गर्‍यो ।
तर ‘मणिकर्णिका’ ले प्रदर्शनको दोस्रो र तेस्रो दिन भने पहिलो दिनको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी ब्यापार गरेको छ । यस फिल्मले दोस्रो दिन शनिबार १८.१० करोड कमाएको छ भने तेस्रो दिन १५.७० करोडको ब्यापार गरेको छ ।
यस अनुसार फिल्म ‘मणिकर्णिका’ ले तेस्रो दिनसम्ममा ४२.५५ करोडको व्यापार गरिसकेको बुझिन्छ । फिल्म ‘मणिकर्णिका’ को कहानी झाँसीकी रानी लक्ष्मीबाईको जीवनीमा आधारित छ ।
फिल्ममा अभिनेत्री कंगना रनौतले रानी लक्ष्मीबाईको भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् । फिल्मको निर्देशन स्वयं कंगना रनौत र क्रिशले गरेका हुन् । फिल्ममा कंगना रनौतसँगै अंकिता लोखण्डे, कुलभूषण खरबन्दा, डेनी डेन्जोगंपा, जिस्सूसेन गुप्ता लगायतको भूमिका रहेको छ ।
यी पाँच चर्चित नायिकाहरु जसले आफु सेक्सी देखिन गरे स्तनको सर्जरी
यी पाँच नायिका जसले सुन्दर देखिन स्तन सर्जरी गरे
बलिउडकै सबैभन्दा महंगी अभिनेत्री बनिन् कंगना, २४ करोड पारिश्रमिक लिँदै
१०० करोड क्लबमा कंगनाको चलचित्र ‘मनिकर्निका ‘ !!
मलाइकाले हट तस्वीर शेयर गर्दै लेखिन् – तपाईं कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ ? (हेर्नुहोस् तस्बिरहरु)
‘कबिर सिंह’ फिल्म पछि शाहिद कपुरको पारिश्रमिक दोब्बर !
फेरी सुहानाको नुहाउदै गरेको बोल्ड तस्बिरले बलिउडमा भाइरल (हेर्नुहोस तस्बिर)